Hexadrone skyview wifi - မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ၆ စီး၊ Gadget သတင်း
သင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်လျှင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များဒီနေ့မင်းတို့ယူလာပြီ Hexadrone skyview ဝိုင်ဖိုင်၎င်း၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်၎င်း၏အမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေသည့်အပြင်၊ သင့်စမတ်ဖုန်းမှ resolution မြင့်မားသောဗီဒီယိုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ပါ, ဒီအကွာအဝေး၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်များသောအားဖြင့်ဘုံမဟုတ်သောဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ခု။
ဤပုံစံသည်အလေးချိန်အလွန်ပေါ့ပါးသောကြောင့်သွက်လက်သောပျံသန်းမှုကိုခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းလေယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်များသောအားဖြင့်စတင်လေ့ရှိသောလေယာဉ်မှူးအများစုကိုနှစ်သက်မည်မှာသေချာသည်။ စျေးကတော့ယူရို ၁၆၉ ဖြစ်ပြီးသင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီ link ကနေဝယ်ပါ.
2 Hexadrone skyview wifi ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
Skyview တွင်ပါဝင်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီပျံသန်းနိုင်သည့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်မည့် Wifi FPV ကင်မရာ သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် ဤအရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ကင်မရာမှထုတ်လွှင့်သည့် ၀ ိုင်ဖိုင်နှင့်သာချိတ်ဆက်ရုံဖြင့်၎င်းလေယာဉ်ပျံသန်းစဉ်အတွင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏မြင်ကွင်းအားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဘူတာတွင်မိုဘိုင်းဆိုက်ကပ်နိုင်သည့်အသုံးအဆောင်သေးသေးလေးတစ်ခုရှိပြီးသင်စက်ကိုစမ်းကြည့်နေစဉ်ဗီဒီယိုကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကင်မရာအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်းကြိုးစားပါ ပထမ ဦး ဆုံးလူပုံစံဖြင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းသည်မည်သူမျှမရရှိနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည် ဒီတော့အစပြုသူအသုံးပြုသူများကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားဤနည်းဖြင့်ပျံသန်းရန်ကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်တို့မတိုက်တွန်းပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုပုံမှန်မောင်းနှင်ပြီးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားဗွီဒီယိုအားအချိန်မှန်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးမတော်တဆမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်း၏ Wi-Fi နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာသည်များသောအားဖြင့်မီတာ ၂၀ ထက်မပိုပါ။
Hexadrone skyview wifi ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
Hexadrone skyview ဝိုင်ဖိုင်
ကင်မရာ resolution နှင့်အတူ C4002 720x480p တစ်စက္ကန့်လျှင် 30 ဘောင်မှာ
ဘက်ထရီ 750 mAh နှင့် 7.5V
အချိန်အားသွင်းသည် 45 မိနစ်
ဘက်ထရီသက်တမ်း 8-10 minutos
Real Time ဗီဒီယို «ဟုတ်ပါတယ် (Wifi မှတဆင့်ပြင်ပစမတ်ဖုန်းတွင်)
ဘူတာရုံ ၁ ဂါဇ
စြေး 169 €
El မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည်အချိန် ၄၅ မိနစ်ခန့်အားသွင်းသည် ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ပျံသန်းမှုပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည်၍ ၈ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အထိခံစားနိုင်သည်။
El Hexadrone skyview ဝိုင်ဖိုင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုမောင်းနှင်သည်ဖြစ်စေလေယာဉ်ကွင်းလည်ပတ်ရန်ပုံမှန် aerobatic mode လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားအသုံးပြုရန်အကြွင်းမဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ၎င်းနှင့်အတူပါရှိသည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြရန်အနေအထားအလင်းအိမ်.
အဲဒီမှာရှိပါတယ် အိမ်ပြန်ခလုတ်ကို နှင့်အကွာအဝေးမီတာ ၁၀၀ ခန့်၏လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး (real-time ဗီဒီယိုများသည်စမတ်ဖုန်း၏ Wi-Fi နှင့်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်မီတာ ၂၀ ထက်မပိုပါ) ။
၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုစတင်သုံးစွဲခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းများကြောင့်၎င်းသည် ပို၍ အဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူများအတွက်နာရီပေါင်းများစွာပျော်စရာပေးသည်။ ၎င်း၏ rotor6ကခွင့်ပြုပါတယ် လေကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပျံသန်းသည့်အခါစက်ပစ္စည်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်; မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏အလင်းနှင့်အရွယ်အစားကြောင့်လေသည်၎င်းကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နှင့်လာသည် ပန်ကာအစောင့်များနှင့်ဆင်းသက်မိုင်များ မြေကြီးနှင့်ဖြစ်စေ၊ အတားအဆီးဖြစ်စေရုတ်တရက်တိုက်မိခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်။ ၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခုလုံးကိုစက်ရုံတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သောအပေါက်များနှင့်သေတ္တာထဲ ၀ င်သည့်ဝက်အူလှည့်ဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Real Time ကင်မရာ
အိမ်ပြန် function ကို
ဤတွင် Hexadrone skyview wifi ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူပြခန်းတစ်ခုကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Hexadrone skyview wifi, အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Nintendo သည် Wii U နှင့်အောင်မြင်မှုမရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကနောက်တဖန်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ